Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) hplc =98% | AASraw
/ Products / Anabolics Steroids / Nandrolone powder Series / Nandrolone Decanoate (DECA) powder
SKU: 360-70-3. Categories: Nandrolone powder Series, Anabolics Steroids
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweNandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Nandrolone Decanoate (DECA) video yehupfu
Name: Nandrolone Decanoate (DECA) powder
Color: Yakachena kusvika kuchena kristalline powder
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) kushandiswa kwehupfu muSteroids
Raw DECA powder Mazita
Nandrolone Decanoate powder / DECA powder inozivikanwawo seDECA yaikura poda durabolin, DUrabol, DECA powder.
DECA poda yakasviba, zvichida yechipiri-inonyatsozivikanwa injectable anabolic steroid mushure me testosterone. Zvinoratidzika kuti inenge yese steroid nevice uye vazhinji vane ruzivo nemasikirini e steroid vanotenda kuti pane zvakanakisisa zvingada kuisa kuti vaise DECA poda yakasviba. Zvisinei, muzvirokwazvo izvi zvinomera hazvina vanabolic chaiwo: zvimwe sjected injectable inogona kuita zvose nokuda kwekukura kwemasumbu iyo DECA powder inogona.
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) Kushandisa Poda
Kune vakadzi, 50-100mg pavhiki inokurudzirwa, kuvarume, 100-200mg pavhiki inokurudzirwa.
Uyezve, apo vatambi vane matambudziko akabatanidzwa, mune dzimwe nguva vanoshandisa DECA powder mune steroid cycle ine maitiro akanaka ekupa rubatsiro. Kunyange kudhesa kwakaderera se100 mg / vhiki kunogona kukwana zvakakwana nokuda kwechinangwa ichi mumitambo yakawanda.
Imwe yepamusoro yakagamuchirwa vanabolic steroid pamusika kusvika musi; DECA Poda yakashata Durabolin yakazviitira zita pachayo. Kusangana neDCA huru powdernoate ester, DECA powder Durabolin inoumbwa neNandrolone steroid hormone. Icho chiri pakati pezvinonyanya kushandiswa vanabolic steroid pakati pevatambi vanotarisa kuvandudza kushanda kwavo. Kupa zvikomborero zvinoshamisa munguva yakatarwa, zvinofarirwa mune chikamu kuti zvive zvinobatsira kurapwa. Nemakore eanabolic steroid kupikisana, zvakakanganisika zveDDECA powder Durabolin zvakasvibiswa nekutya uye kuzvidya mwoyo pamusoro pezvinhu zvakadai se'kutsamwa kukuru. ' Izvi zviri chikamu pamusana pekubatana kwaro nehonomone testosterone uye zvakasiyana-siyana zvenhema zviripo kune zvazvinogona kuita.
Nandrolone (hormone inonzi steroid inogadzira DECA yakasviba guru Durabolin) yakatanga kuonekwa mu1960 nechinangwa chekushandisa mari. Isa pasi pezita rekutengeserana DECA chikafu chinotapira Durabolin, chave chichifamba mumitauro yakawanda nekugadzirisazve nguva nguva. Pasinei neizvi, DECA powder Durabolin inoramba iri zita rinonyanya kuzivikanwa pamushonga kunze uko. Pamusana pekutya pamusoro pezvazvinogona kuita, US inokwana kuwanikwa kwechirwere. Pasinei naizvozvo, DECA powder Durabolin inoramba iripo nanhasi kurapa kwakakurumbira kurapwa kunodiwa nekuda kwezvinhu zvakawanda zvingabatsira.
Vakadzi vanofanira kuonekwa zviratidzo zvekurima, zvakadai sekudzika kwezwi, maitiro, kumwedzi kwemaitiro. Panguva yechipupuriro chenyoro virilism, kudzivirira kusagadziriswa kwehupenyu, kusagadzikana kwechirwere chinodhaka kunokosha.
DECA powdora Durabolin kushandiswa kwazvo kazhinji kune zvakashata zvinokonzera kukanganiswa nekugadziriswa kwekuberekwa kwe testosterone mushure me steroid cycle. Nzira yakaipa yechirungu pa libido uye / kana erectile basa inowanzonzi, asi inongowanikwa chete kana muyero iine 200-400 mg / vhiki kana kuti mushonga unoshandiswa uri woga chero ipi zvayo inoshanda. Matambudziko ari kuipa apo DECA poda yakasanganiswa haisanganiswi ne testosterone kana kuti yakawanda maitiro emamwe maitiro uye androgenic akadai seotbolone, Masteron, kana Dianabol. Ikoko kune kusiyana kwakasiyana-siyana mumhinduro maererano nemigumisiro yechipfuva pa libido uye erectile basa. Kuora mwoyo kwepfungwa kunogonawo.
Raw Nandrolone Decanoate powder Zvimwe mirayiridzo
Nandrolone Nandrolone Decanoate (DECA) injection yepoda inoshandiswa chete mujekiseni yakadzika yepramuscular, zvichida mumumvuri wenyanyisa. Kushandiswa kunofanirwa kushandiswa pamhinduro yekurapa nekufungisisa kwedambudziko. Nandrolone Decanoate powder / DECA powder inofanira kuonekwa sechirongwa chechirongwa uye chakakwana, uye kana zvichibvira, kurapa kunofanira kunge kuri pakati.
Rimwezve ruzivo rwe DECA powder Durabolin (nandrolone) ndeyokuti iri chikamu chinenge chine unyoro maererano nemigumisiro yakaipa pane chekudzikisa uye ganda. Izvi ndezvekuti 5-alpha reductase enzyme inobatsira kuderedza simba reNandrolone, asi kusiyana nevamwe vakawanda vanabolic steroid hazvisinei neyero enzyme, uye simba re testosterone rinowedzera naro.
Zvishoma kudarika testosterone zvakakodzera, DECA powder Durabolin yakakosha pfumbu ine yakakwirira yakakura anabolic rating. Pasinei neizvi, chiyero cheserogenic che DECA yakasvibirira Durabolin ndeye 37 chete (testosterone i100.) Kuderedza DHN kana dihydronandrolone, DECA Durabolin inenge yakasvibiswa yakaita zvishoma nezvishoma uye inotsanangurira kutsungirira vanabolic steroids kunze uko. Iyo inobhadhara kubudirira kwayo muchikamu kune yakaderera zvikuru isrogenic basa. Nepo DECA powder Durabolin inogona kukonzera muropa, inodaro pakukwira 20% kana ichienzaniswa ne testosterone. Iva nechokwadi kuti pasinei neizvi, iwe unogona kunge uchiri kuve uchiziva nezvehupfumi hwaro hwehupfumi.
Nzira yekutenga Nandrolone Decanoate powder; Tenga DECA powder kubva kuAASRAW